Faah faahin:- Weerar ismiidaamin ah oo Muqdisho ka dhacay iyo Al-shabaab oo sheegatay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar ismiidaamin ah oo Muqdisho ka dhacay iyo Al-shabaab oo sheegatay (SAWIRO)
Weerar ismiidaamin ah ayaa maanta lagu qaaday warshadii hore ee nac-naca oo haatan ah saldhiga ciidamada militeriga dowladda federaalka Soomaaliya oo ku taalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Nin la sheegay inuu isku soo xiray waxyaabaha qarxa islamarkaana ku labisan dharka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta gudaha u galay dhismaha warshadii hore ee nac-naca oo ay ka degan yihiin ciidamada militeriga Soomaaliya, isagoona kadib isku dhex qarxiyey dhismahaas.
Qof goobjooge ah oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay inuu arkay meydka 5 askari oo ka mid ah ciidamada militeriga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhaawacyada in ka badan 15 askari kale.
Xiriir aynu la sameeynay saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka gaabsaday inay faah-faahin dheeraad ah ka bixiyaan weerarkaan lagu qaaday xarunta ciidan oo ku taalla dhismaha warashadii hore ee nac-naca ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, warar madax banaan oo aynu si hordhac ah u helnay ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen saraakiil magacydooda lagu sheegay, G/dhexe Abuukar Dheere, Labo xiddigle Macalin C/kariin, Kabtan Bilaawe Cadde iyo sidoo kale madaxii tababarada ciidanka degan xerada warshadii hore ee nac-naca Badri Sheekh Aadan.
Al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegeen inay dileen 25 qof oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan militeriga Soomaaliya oo ku dhex sugnaa xerada weerarka lagu qaaday.
Illaa iyo haatan ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan qaraxaan ismiidaaminta ah ee maanta lagu qaaday warashadii hore ee nac-naca oo haatan ah xero ciidan oo ay degan yihiin ciidanka militeriga Soomaaliya.
Xarakada Al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe xoojisay weerarada ka dhanka ah ciidanka xoogga dalka, waxayna shalay qaraxyo ismiidaamin ah ku weerareen taliyaha cusub ee ciidanka xoogga ee maraayay inta u dhaxeeysa wasaaradda gaashaandhigga iyo kulliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho, balse uu weerarkaasi ka bad-baaday.